I-TSMC igcwalisa umbulelo kuApple | Ndisuka kuMac
Kungumlambo oncothuliweyo, inzuzo yabalobi. Nantso isaci ekufuneka siboniswe eludongeni kwikomkhulu lomenzi wetshiphu. TSMC. Ngomlambo wonke ugutyungelwa kwihlabathi liphela ngenxa yokunqongophala kweetshiphusi, abanye abalobi abakhulu, njenge-TSMC, bajikela ekubeni yigolide.
Uthe umenzi weprosesa kubaluleke kakhulu njengoko Apple A kunye M series, isanda kukhulula amanani okuthengisa kunyaka ophelileyo, kwaye inyaniso kukuba amanani abonisa inzuzo ethile emangalisayo. Ndicinga ukuba abaphathi be-Apple bafumene ibhetshi elungileyo yeKrisimesi evela eTaiwan….
Umenzi weprosesa owaziwayo TSMC upapashe amanani okubalwa konyaka ka-2020 kwaye inyani yeyokuba ayamangalisa, kuthathelwa ingqalelo le ngxaki sibandezeleka kuyo yonke iplanethi ngenxa yokunqongophala kweetshiphusi kunye neeprosesa.
Inkampani iye yaxela ukuba iye yakhula ingeniso ye 24,1% ngo-2021 xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Kwaye khumbula ukuba ikota yengeniso exeliweyo yenziwa yiApple. Ngexesha elifutshane, ngokuqinisekileyo ziindaba ezimnandi, kodwa ziyingozi kwixesha eliphakathi kunye nexesha elide. I-25% ye-turnover ye-TSMC ithathwa ngumthengi omnye: i-Apple.
I-Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ngaphandle kokunika ingxelo ngengeniso enjalo, ikwapapashe ukuba ibhalise ukonyuka kwexabiso. 16,4% kwimivuzo yekota yesine kunyaka ophelileyo. Ngala manani, inkampani inyuse uqikelelo lwayo lokukhula kwengeniso ngoku ibeke phakathi kwe-15 kunye ne-20 yeepesenti.
I-TSMC sele iqalile ukulinga ukuqalisa ukuvelisa ngobuninzi olutsha Iiprosesa ze-3nm, I-Apple ilinde njengamanzi kaMeyi kwii-iPhones zayo, ii-iPads kunye ne-Macs ze-2023. Ngaphandle kokungathandabuzeki, umsebenzi omhle owenziwa yi-TSMC kule minyaka ye-Apple, ngoku uhlawula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-TSMC yenza umbulelo ongazenzisiyo kwi-Apple
IMactracker ihlaziyiwe yongeza iMacBook Pro entsha kunye nezilungiso